संगम: कथाः सम्झौता
यो कस्तो समय आयो आज यो चन्द्रमानै झरेर थिचेजस्तो गरि यो शरिर दुखेको छ । यो सुर्य नै फुटेजस्तो गरि मन पोलेको छ तैपनि सामाजीक नैतिकतामा अल्झेर पुर्णिमाको जुन बन्नु परेको छ । समय नै यस्तै रहेछ । मनभरि सपना बुनेपनि यो पापी समयले लथालिङगपारिदिन्छ जुन सपना वास्तविकता भन्दा एक सेकेण्डपनि अगाडी जान सक्दैन । मानेकी त थिइन रे गितापनि तर के गर्ने परदेशीको के भर हुन्छ रेली मै गित जस्तै बहकिने परेदेशीनेहरुको बेदना कसले बुझिदिने कसैको मिलनले कसैको ह्दयको तार छिन्छ भन्ने ख्यालै नगरि गितालाइ शम्भुदाइको हातमा दिएछन । अहिले एकदम खुशी छिन रे । हुनपनि पर्यो नि त्यो निश्ठुरी परदेशीलाइ श्राप नै लाग्दो हो घरपछाडी करेसामा बाबा आमाको आँखा छलेर लुकी लुकी तस्वीर हेर्न बाध्य बनाउने मोरा जिन्दगी भरिलाइ चोट परिजाओस । कसले बुझिदिने प्रतिक्षाको घडी कति कष्टकर हुन्छ भनेर । गाइ चराउदा साटेको रुमाल टाउकोमा उस्तै गरि बाधिदिदा सय डिग्रीको ज्वरो आउदापनि टाउको नदुख्ने खालको चोखो माया साट्ने परदेशी खै कुनी के लोभमा लागेर मायालुलाइ बिर्सिदिने अनी घरमा हुर्किएकी छोरी पालेर कस्ले पो राखीदिन्छन् र?
तिन साल विताएर आफ्नै गाउ फर्कि गएँ गितासँग भेट भयो कुरा भयो रङ फुङग उडेको पतेराले चुसेका पात जस्तो पहेली भएकी । ठुला ठुला आँखा घुमाउरो गरि गाजल लगाएकी सिउदोभरि सिन्दुर गलामा मंगलशुत्र कुर्तासलवार लगाउने जमना गएछन् कि क्या हो फरियाले बेरिएकी एक व्यावहारिक असल बुहारी घर नै पवित्र लाग्यो गितामा उस्तै चल्चलता उस्तै मुस्कान । सधैभरि कुरीरहनपनि सकिएन तापनि तिमीहरु जस्तो परदेशीको भर हुदैन रे नि त उतै माया लगाउछन भन्थे । सन्तकान्छाको छोरा अझै फर्केको छैन रे उतैको केटिसँग विहे गरेर बसेको छ रे नि त । पोहोर साल खुशी फाट्यो तिम्रो पर्खाइमा यसपाल त खै हजुरआमापनि नातिनीको बिहे हेरेर मर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो विहेपछिको तीन महिनैमा दमको रोगले वित्नुभयो, लाग्यो पुण्य नै गरिछु । अब तिमीपनि विहे गर । अस्तिको मेलामा तिम्री आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिमीले विहे नगर्ने रे । म त शम्भुसँग एकदम खुशी छु । तिमीले जस्तै हर कुरा बुझेको छ उसलेपनि । उसलाइपनि थाहा छ एक असल लोग्ने कस्तो हुनुपर्छ भनेर । त्यसैले विवाह नगर्ने कुरा तिमीले गर्नु उचित होईन । तिमीले मेरो इज्जतको लागी भएपनि विहे गर्नुपर्छ । तिमीलाइ थाहा नै छ हाम्रो समाज तिमीले विहे नगरि बस्यौ भने कुनै चेलीले आमा बाबुको आखा छलेर एक दुइ घण्टा हराउदापनि तिमीमा नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गर्छन् । बुढो भएपछि सहारा त चाहिन्छ नि । तिम्रो त्यो विजोग म हेर्न सक्दिन । सबै सम्बन्ध विवाह मा नै समाप्त हुनुपर्छ भन्ने छैन । के एक नारी र एक पुरुष साथी हुदैमा विवाह नै हुनुपर्छ र विगतमा तिम्रो मेरो सम्मन्ध जे जस्तो भएपनि त्यो सबै वितिसके । त्यसलाइ भुल्न नसकेतापनि जिवनको एक अबिश्मरणिय क्षणको रुपमा लिन सक्छौ । मलाइपनि लाग्थ्यो शम्भुलाइ भन्दा तिमीलाइ सयौ गुना बढि माया । जब शम्भुको व्यवहार मायामा गहिरिदै जादा मलाइपनि लाग्यो यो सिन्दुर र पोतेको अर्थ के हुदोरहेछ भनेर । नारीको सौभाग्य नै त्यहि भएपछि मलाइ तिमीसँग साटेको रुमालको अर्थ सौभाग्यभन्दा ज्यादै कमी लाग्यो । विस्तारै विस्तारै तिम्रो स्थानमा शम्भुलाइ राख्दै गएँ । अहिले उहि नै मेरो जिवनसाथी बनेको छ । उसैकै समिपमा जिवन विताउने छु , सयौ सयौ जुनीकालागी उसैको भएकी छु ।
मलाइ विश्वास छ तिमीले मलाइ राम्ररी बुझेका छौ । माया मारेको कुरै हैन के सुमन , तिमी बुझ्ने कोशीस गर न । उस्तै ढिपी छ तिमीमा अहिलेपनि । तिम्रो यो बानीले मलाइ धेरै सताइएको छ कहिले भुल्ने होला ? तिमीलाइ थाहा छ तिमीले स्कुलमा लगेको किताव सरलाले कुलो नाग्न नसकेर बगाइदिएकी थिइ नि । त्यतिबेला तिमी कस्तरी एकोहोरो लागेर सरसँग त्यहि किताव चाहिन्छ भनेर रिसाउदै आशु झारेको । विचरा! खै त तिमीले त्यहि किताव त पाएनौ नी अरुमा नै चित्त बुझाउनु पर्यो । त्यति सानो कुरा त तिमीले पुरा गर्न सकेनौ । त्यहि किताव त पाएनौ नि पछि बाबाले नयाँ किताव दिदा तिमी कसरी मख्ख परेका थियौ त्यस्तै हो जिन्दगी सबै रोजेको देखेको पाउनु नै पर्छ भन्नेपनि छैन र पाइदैनपनि । नसोचेको हुनु नै जिन्दगीको मज्जा हो । मन हो मानी हाल्छ । तिमीलाइ थाहा नै छ नि पानी जस्तो भाडामा हाल्यो उस्तै अकार बनिदिन्छ । तर विडम्बना त्यो पानीको व्याथा बुझिदिने कोहि हुदैन । उकुसमुकुसकतालाइ कजाएर भएपनि उ बसिरहन्छ किनकी यो उसको वाध्यता हो । सबैलाइ भगवानले एक एक बाध्यताले जेलाएर राखिदिएको हुन्छ । जबसम्म हामी यो लोक छोडेर परलोक भइदैन हामीलाइ एक न एक बाध्यताले जेलिरहेको हुन्छ । धन सम्पत्ति कमाएर तिमीलाइ समाजको अगाडी तिम्रो हात मागेर तिमीलाइ आफनो बनाउछु तिमीले भनेका कुरा हिजो जस्तो लाग्छ । खै ति सबै विगत भए । मैलेपनि सकिन कि तिमीलाइ रोक्न किनकी परदेशीनु तिम्रो वाध्यता थियो देशको स्थिती राम्रो थिएन त्यसैमाथी तिमी टुहुरो जेठो छोरो सबै जिम्मेवारी तिमीमा नै थियो । सबै तिमीलाइ मेरो अनुहार हेरेर मात्रै त पुग्दैन थियो । मेरापनि आवश्यकताहरु हुन्थे । तिम्री आमा हजारौ दुःख सहेर तिम्रो उज्वल भविश्यकोलागी एक छाक खाएरपनि तिमीलाइ हुर्काइन । उनकोपनि केहि सपना थिए होलान । तिमीले घर सम्झेर काम गरेछौ । अहिले तिम्रो घरको स्थिीति राम्रो बन्दै गएको छ । तिमीलाइ दुइ पैसा रिन नपत्याउनेहरु तिम्रो घरमा पाउ मोल्न आएका छन् । भाइबहिनी नाङगा थिए अहिले टम्म जिउ ढाक्ने लुगा लागाउन पाएका छन् । त्यसैले सबैथोक माया मात्र होइन रहेछ । यहा केहि पाउनको लागी केहि गुमाउनु नै पर्छ । खाल्टो नभइ डाँडो बन्दैन । संसार नै यस्तै छ मान्छेको यहि गुणले नै मान्छेलाइ विवेकशिल प्रणाली भनिन्छ । यो रुपरँग त दुइ दिनको मात्र हो । माया मार्नलाइ माया घटाउनलाइ यो भनेकी होइन सुमन बुझ्ने कोशीस गर । माया अपार छ, सँगै हुने चाहाना मेरोपनि थियो । तिम्रो घरमा आउने मैलेपनि धेरै सोचेकी हुँ । हुर्के बढेको चेली कुल घरनाले माग्न आएपछि मैले घरपरिवारलाइ नाइ भन्नै सकिन । मैले के भनेर कुरा टार्ने मेरो कुनै बाटो थिएन । बेला नभएकोपनि होइन । मैले नाइ भनेपनि मेरो कुरा सुन्ने कोहि हुने थिएनन् । एकचोटि तिमीलाइपनि सम्झे । तिम्रो मेरो प्रेमलाइ सम्झे आसुँ गहभरि भयो के तिम्रो माया नभएको भए रुन्थे होला र म? आशु अन्तर आत्मा दुखाएर आउछ । तिमीलाइ थाहै छ , तिमीलाइ मेरो परिवारले दिदैनथेपनि । राम्रो भयो अब तिमीले म भन्दापनि राम्रो जिवन सँगिनी पाउछौ । नयाँ साथी हुन्छ । नयाँ नयाँ कुरा हुन्छन्, विचार नयाँ हुन्छ, नयाँ साइनो जोडिन्छ । आफन्तहरु धेरै हुन्छन् , दुःख सुखपर्दा हेर्ने मान्छे हुन्छन् । तिमीमा खोट लगाउने मेरो कुनै कसुर छैन । आजको जमनामापनि तिमी जस्तो असल साथी पाएको छु । मलाइ यतिमा खुशी छु । मेरो विहेवारी भइसक्दापनि तिमी भेटन आएका छौ । मलाइ त लागेको थियो तिमी मसँग रिसाएका छौ होला भनेर । रिसायौपनि होला के रिसायौ भनु रिसायौ नै । मलाइ पाप लाग्लापनि तिम्रो असल मायालाइ लाद मारेर पराइको सिन्दुर सजाइरहेकी छु । तिम्रो पवित्र मायामा खोट लागाएकी छु । यो सव वाध्यता र विवशमा समयले चालेको खेल हो सुमन । समय आफनो मुठिमा भइदिएको भए रोकेर तिम्रै हातको सिउदो सजाउथेँ तिम्रै साथ जिउने कमस खाएका ति भगवानलेपनि हाम्रो पुकार सुनेनन् । भगवान नै बैरी भएपछि शम्भुको लगन जुरेर आयो । म मा केहि छैन तापनि वाध्य छु आफुलाइ सम्हाली राख्न । आफुबाट कोहि खुशी हुन्छ भने हामी उसको खुशी किन खोसीदिने होइन माया हो सँगत जति गर्यो उति बढदै जाने हो । अहिले शम्भुबाट अपार खुशी पाएकी छु । उसको खुशी देखेर नै म खुशी छु । माया भन्ने चिज यस्तै रहेछ बसेको पत्तै नहुने रहेछ त्यसैले सुमन बेदनाहरु यस्तै हो परिस्थितीसँग जुध्न सक्यो भने सफल भइने रहेछ तर के गर्ने मसँग केहि आधार थिएन मेरो परिवारलाइ विश्वास दिलाउने आमालाइ भनेकी थिएँ आमाले बाबालाइ भन्नुभयो परदेशीको केहि भर हुदैन त्यहिपनि तिम्रो खानदान गतिलो छैन रे आदि इत्यादी मैले सुन्न सकिन र सम्भुसँग विहे गर्न राजी भएँ । यो पापी समाजमा मायाको कुनै अर्थ छैन तिम्रो मेरो मायामा नै खोट रहेछ । माया गरेर विवाह नहुनमा नै मित्रता जिवनभर अमर रहनेछ । अगी बढ जिन्दगीमा एक बाटो विराउदैमा अरुबाटोहरु सबै बन्द हुन्छ भन्ने छैन । अझ बढि सुवर्ण अबसरहरु आउछन् । त्यसैले हरेस नखानु प्राप्तीको लागी मात्र प्रेम गरिदैन प्रेम त्यागपनि हो । माया गरेको चिज सबै पाउनु पर्ने भन्नेपनि छैन नि । के तिमीलाइ लाग्छ तिम्रो दुखाइमा म हास्नेछु खुत्ती मार्ने छु तैपनी सिउदो सजाउनु मात्र मायाको अन्तिमपनि रुप होइन । सिउदो नसजाउदापनि तिमी प्रतिको माया मेरो ह्दयबाट मेटिने छैन ।
बाहिरबाट गिता गिता भन्दै कुर्लिरहेको आवाज गुन्जीयो जुन आवाजमा जोडी हराएको चखेवाको जस्तो टिठ लाग्दो स्वरहरु फैलिरहेका थिएँ, उदाशिनता मिश्रण स्वरहरु गुन्जीएको थियो । शम्भु बोलाउदै छन गिता झस्किन् । धेरै बस्न उचित लागेन । मन गरुङगो पारेर लागे आफनो घर तिर ।
Posted by प्रबिण थापा at Thursday, April 01, 2010
बुझी नसक्नु को यो जिन्दगी
खोइ कहाँ छ म हुनुको अस्तित्व?